Fampielezan-kevitry ny kandidà Rajoelina: « Efa anatin’ny IEM ny fanamboaran-dalana… » | NewsMada
Fampielezan-kevitry ny kandidà Rajoelina: « Efa anatin’ny IEM ny fanamboaran-dalana… »
Nitohy tany Midongy Atsimo, Ivohibe, Ifanadiana, Ikongo ary Fianarantsoa ny fampielezan-kevitry ny kandidàRajoelina, ny asabotsy teo. Nihazo ny tany Moramanga sy Anosibe Anala ary Brickaville ny tenany ny alahady. Anisan’ny olana goavana iraisan’ireo faritra ireo ny fotodrafitrasa. Mazava ny hafatra. “Efa ao anatin’ny vina IEM avokoa izany, indrindra fa ny fanamboaran-dalana manerana ny Nosy”, hoy izy. Nambarany fa handefasana irony fitaovana lehibe fanamboaran-dalana irony isaky ny faritra. Anisan’izany, ny “engins” sy ny “bulls” ary ny “tracks”.
Ankoatra izay, nambarany fa hananganana EPP manaraka ny fenitra iraisam-pirenena avokoa ireo toerana notsidihiny. Hahazo fitaovana samihafa izany, toy ny lafiny informatika mba hahay hifehy sy hikirakira izany sahady dieny mbola any amin’ny ambaratonga voalohany ireo zaza malagasy. Eo koa ny fanorenana fotodrafitrsa ho an’ny fanadiovana sy fahadiovana, toy ny toeram-pivoahana ho an’ny daholobe, manaraka ny fenitra koa.
Anisan’ny niavaka ny tao Fianarantsoa, ny amin’ny hanamboarana kianja lehibe, “Coliseum” tahaka ny etsy Antsonjombe ny any an-toerana.
Tsy mihemotra izany ny fifidianana
Ho an’ny faritra anjakan’ny tsy fandriampahalemana kosa, nampanantena ny tenany fa ho avy ny fitaovana, toy ny angindimby sy ny fananganana hery vonjitaitra manokana. Eo koa ny hahatongavan’ny fitaovana fanaraha-maso ny lalan’ny omby amin’ny alalan’ny “drone” sy ny puce”. Sarona avy hatrany anatin’ny fotoana fohy ny dian’ireo dahalo mpangalatra sy ny omby entiny.
Ankoatra izany, nohitrikitrihiny tamin’ireo faritra ireo sady valin-kafatra ho an’ireo andiana kandidà miketrika ny tsy hanaovana fifidianana fa tsy azo ihodivirana ny daty 7 novambra. “Efa io ny tetiandro ka tsy mihemotra izany intsony. Na iza vonona, na iza tsy vonona, tsy maintsy mandroso isika. Efa roso toy tsa mipody koa”, hoy izy.